Azụmaahịa olu na nsonazụ ya maka azụmaahịa dị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Azụmaahịa olu na nsonazụ ya maka azụmaahịa ọnlaịnụ
José Ignacio | | Ígwé ígwé ojii, CMS na Teknụzụ
Ihe azụmahịa Voice na-anọchite anya azụmaahịa dị n'ịntanetị karịrị ọtụtụ ihe ị ga-eche n'echiche site na mbido. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ usoro azụmahịa nke olu nke na-elekwasị anya na ire ahịa site na akụ nke iji olu nke ngwaọrụ mkpanaaka nyere. Site na ebe anyị nwere ike inwe ọtụtụ ohere azụmaahịa na azụmaahịa dijitalụ.
N'aka nke ọzọ, a ghakwara iburu n'uche na azụmahịa Voice bụ otu n'ime ohere ndị onye ọrụ na-eme nyocha olu, ma ọ bụ ekwentị ma ọ bụ onye enyemaka na-akwadoghị, iji zụta ihe n'ịntanetị. Bụ ezigbo usoro ọhụụ na nke ahụ n'ụzọ ụfọdụ ga - agbanwe azụmahịa n'ịntanetị site ugbu a gawa.
Ma ọ bụ ka ị ghọta obere mma site ugbu a gaa n'ihu. Emebere ya na atụmatụ ọgbara ọhụrụ ga - enyere gị aka, nke mere na site n'usoro ụda olu a pụrụ iche, ị nwere ohere ịbịakwute ihe ọ bụ n'ezie. sitere na ihe omume azụmahịa ejiri ojiji nke olu a ga-egbu ya. Dịka ị ga-ahụ, ọ bụ nnukwu ọdịiche gbasara ụdị ndị ọzọ nwere ụdị okike. Mana site ugbua gaa n’ihu, anyị ga-akuziri gị ntakịrị ntakịrị ka ị wee mata ihe ọ mejupụtara na otu ị ga-esi nweta arụmọrụ ka mma na ngwa ya na azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ dabara nke ọma na e nwere ọtụtụ ụzọ iji nwekwuo ahịa n'ịntanetị, ọtụtụ n'ime ha nwere ike itinye n'ọrụ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, dịka ị ga-enwe ike ihu site n'oge a gaa n'ihu.
1 Gịnị bụ azụmahịa olu ma ọ bụ azụmahịa olu?
2 Kedu ka ahia olu si arụ ọrụ?
3 Kedu uru nke azụmaahịa olu?
4 Kedu ihe ịma aka nke azụmahịa olu taa?
5 Kedu ka ọdịnihu nke azụmahịa olu dị?
6 Kedu ka esi eji azụmahịa olu?
7 Ngwa ndị ọzọ na azụmaahịa olu
Gịnị bụ azụmahịa olu ma ọ bụ azụmahịa olu?
Azụmaahịa olu na-eji teknụzụ amata olu iji belata ndị ọrụ njedebe dabere na ngwaike (dị ka òké na keyboard), na-enye ha ohere iji iwu olu chọta ma zụta ngwaahịa na ntanetị. Iji jiri azụmaahịa ụda olu, naanị ihe achọrọ bụ ngwaọrụ nwere olu na onye na-enyere gị aka.
Ma olee mgbe ahia olu bịara? Ọfọn, teknụzụ nyocha okwu malitere na 1961, mgbe onye injinia IBM William C. Dersch mepụtara usoro izizi nkwupụta okwu n'akụkọ ihe mere eme, nke a kpọrọ "Shoebox." Ọ ghọtara okwu ekwuru 16, mana n'oge ahụ, a na-eji ya agbakọ nsogbu mgbakọ na mwepụ. Agbanyeghị, ọ bụ usoro mbụ n'ime ụwa nke teknụzụ olu. Na 2011, e mere ka onye enyemaka olu, Siri ruo iPhones, na 2012, Android weputara onye enyemaka olu ya.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na teknụzụ olu na ndị na-enyere olu aka abụghị ihe ọhụrụ ọhụụ, ịnabata azụmahịa olu ka bụ ihe ọhụrụ. Ndị na-azụ ahịa na-amalite mgbe niile iji iwu olu na-achọ ma na-azụ ahịa n'ịntanetị, ụfọdụ ka na-ala azụ ka ha na-eche ịnwale mmiri nke ụzọ aka na-enweghị aka e-azụmahịa.
N'ime afọ 5 gara aga, enweela ịrị elu dị ukwuu na ngwaọrụ olu dị ka Amazon Echo na Google Home, na-eduga na nhịahụ yiri nke ndị ahịa na-achọ ịnwale azụmahịa olu. Dika ihe igwe okwu di iche iche n’ile ahia, onodu a gha agha n’iru ichikota ike.
Kedu ka ahia olu si arụ ọrụ?
Ebumnuche olu ka ọ bụrụ, ọ bụ, kwụ ọtọ imezu. Si ele ndị ahịa anya, naanị ihe ị chọrọ bụ olu gị. Mgbe ahụ, ịchọrọ teknụzụ iji mee ya. Ndị a bụ ihe anọ achọrọ dị mkpa maka itinye ya n'ọrụ
Chọrọ ngwaọrụ nwere olu olu; Nke a nwere ike ịbụ ama ma ọ bụ ngwaọrụ yiri olu na-arụ ọrụ (dị ka Amazon Echo ma ọ bụ Google Home).
Ikwesiri ikwu iwu iji teta ngwa a, dika “Hey Siri.”
Ikwesiri iji okwu na-akpali akpali (na-abụkarị ngwaa ma ọ bụ ihe omume). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kwuo iwu, "Siri, nye ngwaahịa XYZ," "ịtụ" ga-abụ isiokwu.
Ghaghi ima maka uda olu gi na ihe o gha eme dika ihe gi gha amata ihe i jidere ma ghota na obu olu gi puru iche ma gha agbali izere itinye iwu maka ihe a na-enyo enyo bu olu "amaghi".
Kedu uru nke azụmaahịa olu?
A na-eji ngwaọrụ ndị nwere olu arụ ọrụ maka ebumnuche dị iche iche, dịka ịge egwu, ịlele ọnọdụ okpomọkụ, ịchọ ihe ọmụma n'ịntanetị, na ịme ihe omume kwa ụbọchị dị ka ịtụ nri na ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ebe ọ bụ na azụmahịa bụ nnukwu ohere maka teknụzụ olu, ọtụtụ ụlọ ọrụ ewerelarị azụmaahịa olu iji melite ahụmịhe ndị ahịa ha n'ịntanetị. Isi uru bụ:
Nnukwu uru nke olu olu bụ otú mfe ọ bụ iji. Ihe niile ị chọrọ iji rụọ ọrụ ọ bụ ngwaọrụ nwere olu olu na olu gị. Ọ na-enye ndị ahịa ohere ịzụ ahịa mgbe ha na-esi nri, na-arụ ọtụtụ ọrụ, ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala. Productszụta ngwaahịa dị na ntanetị adịbeghị mfe site na iji olu olu na-enweghị aka.
Nnweta n'oge ọ bụla n'ụbọchị
Ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa site na azụmahịa olu 24/7, dịka ha ga-eme n'ụlọ ahịa ọ bụla na weebụ, mana teknụzụ olu na-enyekwa ha ohere ịme nke a ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị usoro ogologo.
Site na azụmaahịa olu, onye ahịa agaghị abanye ma ọ bụ mejupụta nkọwa nkeonwe ha na ụlọ ahịa weebụ nke ụlọ ọrụ iji zụta ngwaahịa na ntanetị - echekwara oge bara uru ma nwee mmụba kachasị.
Nhazi nke ahụmịhe ịzụ ahịa
Ebe ọ bụ na azụmahịa dị mfe iji, ndị mmadụ na-ejikarị ngwa ọrụ ha emekọrịta ihe. Ngwaọrụ nwere ike ịchịkọta data karịa n'aka ndị nwe ha, ma jiri data a hazie ahụmịhe ndị ahịa ha. Companlọ ọrụ ndị na-anakọta ozi gbasara omume ndị ahịa, mmasị, na data akụkọ ihe mere eme nwere ike ịmepụta ngwaahịa dị ike na usoro ịzụ ahịa iji karịa asọmpi ahụ, ma na-eme ndị ahịa ha obi ụtọ na ịzụta ọ bụla.
Kedu ihe ịma aka nke azụmahịa olu taa?
Olu mmadu obula bu ihe puru iche, komputa nwere ike isiri ya ike ighota uda na ihe ndi ozo.
Ndị na-emepe emepe ga-anọgide na-emewanye atụmatụ asụsụ iji merie nsogbu a. Taa, asụsụ bekee bụ asụsụ kachasị etolite etolite etolitekwara na teknụzụ olu, mana Amazon amalitela ire ihe karịrị mba iri asatọ ngwaọrụ Echo, yabụ ekwesiri ịkwalite mmepe asụsụ iji kwado mkpa a.
Mee mmekọrịta gị na "mmadụ"
Na mgbakwunye na mgbochi asụsụ, mmemme olu na-agbasi mbọ ike ime ka mmekọrịta nke ndị na-enyere olu aka nwee mmetụta dị omimi na nke okike, dị ka nke dị n'etiti mmadụ abụọ. Idozi nsogbu a nwere ike imetụta ntụkwasị obi ndị na-azụ ahịa na teknụzụ olu ma mee ka ojiji ka ukwuu na ụwa.
Ọmụma ihe ọmụma
Onweghi ihe omuma banyere ikike nke ndi na-enyere olu aka, otutu ndi ahia anaghi azuta ma obu jiri ndi enyemaka olu n’ihi na ha chere na ha amataghi ihe onye enyemaka olu nwere ike ime, otu esi eji ya, ma obu na onwere nsogbu tinyere
Kedu ka ọdịnihu nke azụmahịa olu dị?
Azụmaahịa olu nwere ike ịbụ onye na-agbanwe egwuregwu maka B2C na B2B e-commerce, ozugbo emesịrị ihe mgbochi nnabata. Dabere na Google, 20% nke nyocha niile emeelarị site na iwu olu. Ka ọ dị ugbu a, njirimara ọrụ teknụzụ olu na US naanị na-anọchite anya 42,7% nke ndị bi na ya. Econsultancy na-ebu amụma na site na 2020, azụmahịa olu ga-abụ ọkara nke ọchụchọ niile n'ịntanetị. A na-atụ anya ọbụna ka ọ bụrụ akụkụ nke brik na ahụmịhe ịzụ ahịa ahịa, na-enye ndị mmadụ ohere ịchọ ihe na ntanetị na ụlọ ahịa, n'otu ụzọ ahụ ha na onye ode akwụkwọ ụlọ ahịa ga-esi na-emekọrịta ihe.
Ohere maka ulo oru B2B
Maka ụlọ ọrụ B2B, azụmahịa olu bụ nnukwu ohere ọ bụghị naanị iji melite usoro na ụlọ nkwakọba ihe na ọfịs, kamakwa ịpụ na asọmpi ahụ. Companieslọ ọrụ B2B na-asụ ụzọ iji nweta teknụzụ ọhụrụ dịka azụmaahịa olu ga-enwe ike ịnye ndị ahịa B2B ha echefu echefu, dị mfe ma nwee ọhụụ n'ịntanetị.
Ọ bụ ezie na teknụzụ olu na-agbanwe, ọ na-enwe mmetụta n'ọtụtụ akụkụ, gụnyere azụmahịa e-commerce. N'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya n'otú olu olu si agbanwe agbanwe n'ịntanetị, azụmahịa azụmahịa bụ, na ihe kpatara o ji nwee ike ịghọ nnukwu ihe na-esote na azụmahịa e-commerce. Ha ga ahụ na teknụzụ amata okwu agbanwela ụzọ anyị si azụ ahịa na ntanetị.
Azụmaahịa olu bụ teknụzụ na-enye ihe ọzọ maka iji ahụigodo na òké ịtụ na ịzụta ngwaahịa na ntanetị. All ndị ahịa kwesịrị ịchọ na ịzụta ihe online iji olu iwu bụ a mebere nnyemaaka dị ka Google nnyemaaka ma ọ bụ Amazon Alexa - na, n'ezie, a olu. Tradingzụ ahịa olu abụghị naanị ịchọta ngwaahịa ahụ n'onwe ya, kamakwa ịtụ na ịzụta ya.
Site n'enyemaka nke azụmahịa olu, ịmecha zụọ na-adị ngwa ngwa ma enwere ike ịme ya n'oge ọ bụla n'ụbọchị, ọbụlagodi mgbe ị na-asa ahụ, ọ bụrụ na onye enyemaka gị nwere ike ịnụ ha. Dabere na nkwupụta ịzụ ahịa ịzụ ahịa ndị na-azụ ahịa, isi ihe mere ndị ahịa ji azụ ahịa olu bụ:
O kwere omume ime ya mgbe ị na-eme ihe ndị ọzọ
Ọsịsọ inweta azịza na nsonazụ.
Y’oburu na i bu onye na ere ahia ma ghara ikwadebe maka omume ime e-commerce a di nkpa n’ebe v-commerce di, mgbe ahu i ghaghi adi.
Kedu ka esi eji azụmahịa olu?
Iji teknụzụ olu na-azụ ahịa na ntanetị, ndị ahịa chọrọ ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na onye enyemaka na-akwadoghị. Brandsdị ndị ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama bụ Amazon Echo (nke a na-akwado site na Alexa) na ụlọ Google (nke Google Assistant kwadoro).
A na-eji ndị enyemaka nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ maka ebumnuche dị iche iche: ige ụdị egwu ọ bụla, ịchọ ozi ọ bụla n'isiokwu ọ bụla, ịrụ ọrụ akpaaka n'ụlọ, yana ịtụ ahịa nri. Ka anyị lelee otú e si eji ndị enyemaka aka eme ihe maka ịzụ olu n'voicentanet.
N'ihe banyere Amazon, ndị ahịa nwere ike iji ngwaọrụ nwere ikike Alexa chọọ, ịtụ, na zụta ngwaahịa Amazon n'iji olu ha. Okwu a bụ "Alexa" na - eme ka ngwaọrụ rụọ ọrụ. Ọmụmaatụ, a ahịa ga-asị "Alexa, ịtụ" na aha nke ngwaahịa na ha chọrọ ịzụ. Alexa achọpụtazi a asịwo si echekwara zuo akụkọ ihe mere eme na-atụ aro na ngwaahịa ndị dabeere na aga na data. Ọ bụrụ na data gara aga egosighi iwu ndị gara aga dị ka nke ugbu a, mgbe ahụ Alexa na-atụ aro ngwaahịa "Amazon Choice" na mbụ. Alexa na-ekwupụta ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ ma jụọ ma onye na-azụ ahịa chọrọ ịzụta ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, Alexa na-etinye iwu; ma ọ bụrụ na azịza ya bụ mba, Alexa nwere ike na-atụ aro ndị ọzọ nhọrọ.
Ngwa ndị ọzọ na azụmaahịa olu
Amamịghe echiche nwere ikike ịgbanwe ihe ọ bụla dị nzuzu dị ka ihe nwere ọgụgụ isi! Ee, AI na-eme nke a oge ụfọdụ ma site na ịrị elu nke ndị enyemaka olu, ihe enwetala obi ụtọ. Ndị ụlọ ọrụ gburugburu ụwa ghọtara mkpa ọ dị "Azụmaahịa Olu."
Ihe niile malitere site na teknụzụ okwu-ederede na Google mepụtara. A tọhapụrụ "Google Voice Search" maka iPhones, ngwa a dị elu jiri ogige data iji gbakọọ data ma nwee ike nyochaa ya, nke a bụ n'ezie ezigbo ihe atụ nke okwu mmadụ.
Ndị na-enyere olu aka bụ okwu sara mbara ma na-ezo aka na ndị na-akparịta ụka na-arụ ọrụ dị iche iche maka mmadụ ma ọ bụ onye ọrụ, ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-atụgharị iwu olu na ọnọdụ nke arịrịọ ahụ. Ntọala ngwanrọ nke ihe ndị dị otú ahụ nwere ngwakọta nke teknụzụ AI dị ka Nkọwa Okwu Akpaghị Aka (ASR), Nkọwa Okwu-Okwu-Okwu (TTS), Nghọta Asụsụ Mba (NLU), itinye aka na ọkwa okike. Nke mkparịta ụka ahụ ọrụ.
Categorydị a nke ngwaọrụ ofntanetị (IoT) mara aha dị iche iche gụnyere: Smart Ọkà Okwu, AI nnyemaaka, Smart Personal Assistant, Digital Personal Assistant, Voice Controlled Smart Assistant, Voice Activated Smart Assistant) na ndị na-akparịta ụka. A na-eji ngwaọrụ ndị a niile arụ ọrụ n'ahịa ma na-erigbu ha ugbu a iji mee ka ndị na-azụ ahịa zụta ngwaahịa kwalitere na nyiwe ha.
Enyemaka maka ndị na-azụ ahịa:
Dabere na otu n'ime nyocha ndị mere n'oge na-adịbeghị anya, a na-eji ihe karịrị ijeri 3.250 na-enyere ndị na-enyere aka olu dijitalụ na ụwa dijitalụ a ma na-eme atụmatụ na site na afọ 2023 ọ ga-eru nkeji ijeri 8.000, nke bụ karịa ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa n'oge a. . Y’oburu na itule onu ogugu nke United States, ihe dika nde mmadu 111,8 n’oru nke ndi n’enyemaka olu dijital na-eji otu ugboro n’onwa.
Ndị na-enyere olu aka nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche, dịka na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ọkà okwu Bluetooth dị ka "Alexa" ma ọ bụ ndị ọrụ sọftụwia agbakwunyere dịka "Cortana" ma ọ bụ "Catalina" na ekwentị na kọmpụta.
Ọrụ ndị nnyemaaka olu ama ama ama ama ndị ọrụ na-enweta na-akpọ egwu, na-ejikwa ngwa dị mma, na-enye ozi gbasara ihu igwe, na-aza ajụjụ ihe ọmụma izugbe, na ịtọ ntọala.
Ma, site na ọganihu ndị a na-adịbeghị anya na ọgụgụ isi nke teknụzụ na teknụzụ mmụta igwe, ojiji nke ndị enyemaka olu maka iji azụmaahịa abawanyela. Taa, a na-ahụ ndị na-enyere dijitalụ aka dị ka isi okwu ọhụụ nke na-enyere ụdị mmekọrịta ọhụrụ n'etiti ndị na-azụ ahịa na ụdị.
Tradingzụ ahịa olu na-enyere ndị ọrụ ya aka ịtụ ahịa na ntanetị site na iji enyemaka olu. Ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-eji ọkà okwu amamịghe maka ịzụrụ ihe na-arịwanye elu na pasent nke ndị na-azụ ahịa na-eji ndị enyemaka na-akwadoghị ejedebeghị na otu ngwaahịa, mana ha dịgasị iche iche n'ọtụtụ ngwaahịa. N'ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ, ihe dị ka 21% nke ndị nwe ụlọ okwu ọgụgụ isi nke America zụrụ egwu ma ọ bụ ihe nkiri na 8% azụrụ ihe ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Azụmaahịa olu na nsonazụ ya maka azụmaahịa ọnlaịnụ
Azụmaahịa Azụmaahịa mmekọrịta na ecommerce na 2020
Atụmatụ na ahịa ịntanetị